Diyaaradii ugu horeysay ee rakaab oo Shiinuhu sameystay oo hawada gashay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeBusinessDiyaaradii ugu horeysay ee rakaab oo Shiinuhu sameystay oo hawada gashay
Diyaaradii ugu horeysay ee rakaab oo Shiinuhu sameystay oo hawada gashay
May 5, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh Business, World 0
Diyaaradda ayaa duuli karta dherer gaaraya 3,000 kiilomitir iyo xawaare dhan 300 mitir saacadiiba. [Xigashada Sawirka: AFP]
Beijing-(Puntland Mirror) Diyaaradii ugu horeysay oo gudaha dalka Shiinaha lagu sameeyo ayaa dhammeystirtay duulimaadkeedii ugu horeeyay, taasoo caqabad weyn ku ah shirkadaha sameeya diyaaradaha ee Boeing iyo Airbus.
Kadib 90 daqiiqo oo ay hawada ku jirtay diyaarada ayaa si nabad ah ugu noqotay garoonka diyaaradaha Pudong oo kuyaala Shanghai.
Diyaaradda ayaa calaamad muhiim ah u ah hami kororka Beijing ee in ay soo galaan suuqa duulimaadyada caalamiga ah.
Shirkada diyaaradda ee Comac oo ay leedahay dowladda ayaa la qorsheeyay tan iyo sanadkii 2008-dii laakiin dayuurada ayaa si joogta ah dib loogu dhigayay.
Duulimaadka kowaad ee maanta oo Jimce ah, diyaaradda ayaa qaaday keliya shaqaalaheeda oo ka kooban shan duuliye iyo injineero waxaana ay ka hor kacday kumanaan masuuliyiin sare ah, shaqaalaha duulimaadka iyo taageeroyaal.
Taleefishinka dowladda ayaa sheegay in diyaaraddu ay duuli karto dherer gaaraya 3,000 mitir iyo xawaare dhan 300 kiilomitir saacadiiba.
Diyaaradda C919 ayaa waxaa ku baxay kharash dhan $50 milyan. [Xigashada Sawirka: Getty Images]
Diyaaradda oo la dhaho C919 ayaa waxaa loogu talogalay in ay tartan toos ah la gasho Boeing 737 iyo Airbus A320.
Sida ay sheegeen warbaahinta Shiinaha, diyaaradda C919 ayaa qaadi karta 168 rakaab ah. Waxaana ku baxay kharash dhan $50 milyan oo ka yar nus inta ay joogaan Boeing 737 ama Airbus A320.
Jaangooyaha badqabka duulimaadyada Yurub ayaa bilaabay hanaanka shahaado siinta diyaaradda C919, taasoo tilaabo muhiim ah u ah sidii ay ugu guuleysan lahaayeen suuqa caalamiga ah.
Shiinaha ayaa lahaa hamiga ah sidii ay u sameyn lahaayeen warshadda diyaaraddaha rayidka oo ay iyagu leeyihiin tan iyo sanadkii 1970-kii.
February 11, 2017 Sarifka dollarka oo hoos u dhacay gudaha Muqdisho
Somalia’s cabinet sacks auditor general
US sanctions top ISIS leader in Somalia’s Puntland
Garowe-(Puntland Mirror) The United States has sanctioned top ISIS leader in Puntland, Somalia, the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) said in a statement on Tuesday. In the statement, the U.S. said it had added Mahad [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa uga digtay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed in ay ka qaybgalaan doorashooyinka Soo socda, sida uu sheegay afhayeenka Al-Shabaab. Sida uu ku sheegay fariin cod ah oo lagu soo daabacay [...]